ITUNES ကိုဖို့ BACKUP လုပ်ထား DISABLE လုပ်နည်း - ITUNES ကို - 2019
ITunes ကိုဖို့ backup လုပ်ထား disable လုပ်နည်း
သငျသညျကို install တဲ့အခါမှာ Third-party software ကိုကိုယ်တော်တိုင်တစ်နည်းနည်းကို၎င်း, operating system အဖြစ်အဘို့မှတ်ရလိမ့်မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် install အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။ ဝန်ပရိုဂရမ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးအားလုံးလိုအပ်သောဒေတာများကိုပုံမှန်အားဖြင့် website တွင်ပြသလျက်ရှိသည်လျှင်, ဘယ်လို, အလှည့်အတွက်နည်းနည်း OS ကိုလေ့လာသင်ယူ? ဒါဟာ Windows 10 ကိုအတွက်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကျနော်တို့ကဒီဆောင်းပါးထဲမှာကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။
10-bit နဲ့ Windows ကိုပြဌာန်းခွင့်တို့အတွက်နည်းလမ်းများ
သင် operation system ၏ bit နဲ့အတိမ်အနက်ကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ထိုသို့ Third-party software များ၏အကူအညီဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးပြုသောအမှုများနှင့် built-in OS ကိုကိုယ်တိုင်၏နည်းလမ်းများနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုလူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းများအကြောင်းကိုသင်ပြောပြပါ့မယ်နှင့်အဆုံးမှာအသုံးဝင်သောဘဝဟက်ကာဝေမျှဖို့။ ရဲ့စတင်ကြပါစို့။
အဆိုပါနည်းနည်း operating system ကိုအဆုံးအဖြတ်အပြင်, အခြားအသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ၏ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုပေးနိုင်လျှောက်လွှာ၏ခေါင်းစဉ်တွင်တွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ ထိုအခါ software ကိုအစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းကို, ဒါပေမယ့်လည်း "သံ" ကို PC နှင့် ပတ်သက်. မယ့်။ အောက်ပါလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိရန်:
ဒေါင်းအစောပိုင်းက run နှင့် AIDA64 install လုပ်ပါ။
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၏အဓိကဧရိယာများတွင်အမည်ရသည့်အပိုင်းကိုရှာဖွေ "Operating System ကို"ထိုသို့ဖွင့်လှစ်။
အတွင်းပိုင်းပုဒ်မခွဲများ၏စာရင်းကိုဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ထဲကအလွန်ပထမဦးဆုံးပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။ သူကမူလတန်း partition ကိုအဖြစ်အမည်တူသမုတ်သော။
ဒါကနည်းနည်းက Windows ပေါ်မှာ data ကိုအရပ်၌လက်ရှိစနစ်, အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ မျဉ်းမှတ်ချက် kernel ကို၏ '' အမျိုးအစား "။ သူမ၏ကနေဖြတ်ပြီးကွင်းခတ်အတွက်အလွန်အဆုံးမှာသတ်မှတ်ရေးဖြစ်ပါသည် "x64" ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှု၌တည်၏။ ဒီ bit နဲ့နက်ရှိုင်းဗိသုကာကြောင်း။ ဒါဟာနိုင်ပါတယ် « X86 (32) " သို့မဟုတ်အခြား « x64 ».
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ဒီနည်းလမ်းကိုရိုးရှင်းပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်သင်သည် AIDA64 မကြိုက်ဘူးလျှင်, သင်, ဥပမာ, ငါတို့ယခင်ကပြောသည်ခဲ့သောအဆိုပါဧဝရက်, တူညီတဲ့ software ကိုသုံးနိုင်သည်။
Read more: ဧဝရက်တောင်ထိပ်ကိုသုံးပါဖို့ကိုဘယ်လို
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အပို software များ install လုပ်လိုကြဘူးတဲ့သူတွေကိုအသုံးပြုသူတဝတည်းဖြစ်ကြ၏လျှင်, သင်, သင်လည်းသူမ၏နည်းနည်းရှာတှေ့နိုငျသောကျေးဇူးတင်စကားစံ OS ကို tools တွေကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့နည်းလမ်းနှစ်ခုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
desktop ပေါ်မှာတွင်, အိုင်ကွန်ကိုရွေးပါ "ဒီကွန်ပျူတာ"။ ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှင့်အတူကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ရလဒ်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုမီနူးထဲမှာ, select လုပ်ပါ "Properties ကို"။ အဲဒီအစားသင်သော့ကိုသုံးနိုင်သည်, ဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက် Win + ခဏရပ်ရန်.
တစ်ဦးကဝင်းဒိုးနည်းနည်းအပေါ်ဒေတာအရပ်၌ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်ပြီးယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကတတန်းအတွက်စာရင်းသွင်းထားပါသည် "စနစ်အမျိုးအစား"။ သငျသညျအောက်ပါပုံရိပ်ပေါ်တွေ့နိုင်ပါသည်သာဓက။
"န့်သတ်ချက်များ" operating system ကို
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Start" နှင့် pop-up menu ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "န့်သတ်ချက်များ".
partitions ကိုစာရင်းထဲကနေ, အလွန်ပထမဦးဆုံးကိုရွေးပါ - "စနစ်"၎င်း၏အမည်ကိုအပေါ်တခါနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်။
ရလဒ်အဖြစ်, သင်ကဝင်းဒိုးအသစ်မြင်လိမ့်မည်။ ဒါဟာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားပါသည်။ Scroll သည်ပုဒ်မခွဲမှအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့လယ်ကွင်း left "ဟုအဆိုပါစနစ်တွင်"။ ဒါကြောင့်ရွေးချယ်ပါ။ ပြတင်းပေါက်တစ်နည်းနည်းနှင့်လက်ျာတစ်ဝက်ချ scroll ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြီးနောက်။ ထိုဒေသတွင် "စက်ပစ္စည်းလက်ခဏာ" ဒါဟာသတင်းအချက်အလက်ပိတ်ဆို့ပါလိမ့်မယ်။ Windows 10 ကိုအသုံးပြုသော bit လာမယ့်မျဉ်းမှစာရင်းဖြစ်ပါတယ် "စနစ်အမျိုးအစား".
ပြီးဆုံးနည်းနည်းစွမ်းရည်အဆုံးအဖြတ်များအတွက်နည်းစနစ်များ၏ဤဖော်ပြချက်၌တည်၏။ ဤဆောင်းပါး၏အစအဦးမှာကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ် hacking အနည်းငယ်ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြရန်ကတိပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာတော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့င်: စနစ် drive ကိုဖွင့်လှစ် "ကို C" နှင့်အတွင်းရှိဖိုင်တွဲများကိုကြည့်။ ဒါကြောင့်နှစ်ဦးကို directory များပါဝင်သည်ဆိုပါက "Program Files" (x86 အဖြစ်ကြောင့်မပါဘဲမှတ်သားရန်), ထို့နောက်သငျသညျ 64-bit စနစ်ကရှိသည်။ ဖိုင်တွဲခဲ့လျှင် "Program Files" တဦးတည်း - 32-bit နဲ့စနစ်။
ကျနော်တို့ကိုအများကထွက် set သတင်းအချက်အလက်များသည်သင်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပြီနှင့်သင်အလွယ်တကူ Windows 10 ကိုနည်းနည်းဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ခဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်။